Sign-in-Myanmar.com - Online Wholesale for AD & Signage Product
BUK17,100 - 18,000/L
BUK13,028 - 13,500/pc
1.27*50m Yellow Matte Laminating Film
BUK36,800 - 40,000/roll
SIGN EXPO MYANMAR 2019
ပိုမို၍>>မြန်ဆန်သော သတင်းနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်မှုများ
Sep. 12 All Available! Roland Mimaki Mutoh Spare Parts!
May. 12 Don't Miss! You Left Some Cash Here!
Mar. 24 Tip:Difference between dye and pigment sublimation ink.
Jul. 08 LED Tip:How to Quickly Select the Best Module for Your Sign Work?
Jun. 16 NEW! Mini CNC Router!Powerful and Willful!
Metal & Non-Metal Laser Cutting Machine 1312
51" x 35" (1300mm x 900mm) Detachable High Precision Laser Cutting Machine,Yongli 130W/150W
BUK313,200 - 360,000/set
δ 0.76mm UV Printing Blank PVC Card 85.5mm x 54mm （10000PCS）
1 Carton MWN-30 All-purpose Adhesive / Contact adhesive 30g/pc 20pcs/carton
BUK21,600 - 24,000/carton
MM-30 All-purpose Adhesive /Contact adhesive 30g/pc, 30pcs/carton
BUK360 - 450/bottle
Eyelet Hand Press Grommet Machine Tool for Banner Including One Mold (4#)
BUK73,600 - 80,000/set
δ 0.38mm UV Printing Blank PVC Card 85.5mm x 54mm （10000PCS）
BUK1,045,443 - 1,188,003/set
24" x 98´ (0.61x30m) Application Tape for Heat Transfer Vinyl
BUK20,900 - 22,000/L
BUK42,072 - 44,286/bottle
Varnish for UV Ink
Konica 512i 6PL Solvent Ink
BUK38,000 - 40,000/bottle
BUK2,850 - 3,000/pc
BUK9,253 - 9,500/pc
12cm Cleaning Swab for Epson / Roland / Mimaki / Mutoh Printers
BUK14,483 - 18,333/parcel
Mimaki JV3/JV22 DX4 Head Data Cable---21pin, 23cm
BUK6,179 - 7,821/pc
BUK13,929 - 18,572/pc
Zhongye Seiko Printer JYY Solenoid Electromagnetism Valve
BUK62,132 - 69,036/pc
BUK7,725 - 9,778/pc
IP65 36x9 mm 5054 (2p) 0.4 w LED Module
BUK238 - 250/pc
24" 60cm Manual Precision Rotary Paper Guillotine Trimmer, Sharp Photo Paper Cutter
BUK176,749 - 198,594/pc
Thermal Engineering CAD Plotter
Phaeton SK4 Solvent Ink Cleaning flush (5L)
BUK374,367 - 394,071/set
5V 150W Indoor LED Power Supply
PVC လျှပ်စစ်ကြိုးတန်းထားသသော အောင်လံတံခွန်
အီကို ၀ါး အောင်လံတံခွန်ခင်းကျင်းပြသမှု
အတွင်းပိုင်း LED အပေါ်အောက်ဆွဲသော ဆိုင်းဘုတ်
အပြင်ပိုင်းတစ်ဝက် LED အပေါ်အောက်ဆွဲသော ဆိုင်းဘုတ်
LED ချောင်းနှင့် ခါးပတ်မီး
အပြင်ဘက်သုံး ကြီးမားသော LED စာသားဘုတ်ပြား
SMD LED မျက်နှာပြင်ပြသမှု
သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ကောင်းမွန်ကျွမ်းကျင်သော တရုတ်ဆိုင်းဘုတ်ထုတ်ကုန်များအထောက်အပံ့ပေးသောစင်တာ။ ကြီးမားသောကုန်စည်ရောင်းချမှုဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်းဘုတ်ထုတ်ကုန်များလက်လီရောင်းဝယ်ရေးဖြစ်ဖြစ် www.Sign-in-Chin.com မှကြိုဆိုပါတယ်။
ဆိုင်းဘုတ်တုံး | ဆိုင်းဘုတ်ထုတ်ကုန်များသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကမ်းလှမ်းမှုများ | ထုတ်ကုန်ဆိုင်းဘုတ်အသစ်များ | ခေတ်စားသောထုတ်ကုန်ဆိုင်းဘုတ်များ
အပူဖိစက်, ဗီနိုင်းဖြတ်စက်, Roland ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း, ဒလိမ့်တုံး အလွှာပါးသောစက်, ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသော ပြသမှု, ပြန်ဆွဲယူနိုင်သော ဒလိမ့်တုံးမြှင့်စင်, လက်သည်းအလှပြင်စက် , အေးသောအလွှာပါးစက် , အပေါ်လှိမ့်တင်သော အောင်လံတံခွန , လေဆာ ပုံဖော်ပုံထွင်းစက် , လေဆာ ဖြတ်စက် , CNC ပုံထွင်းပုံဖော်စက်နှင့် CNC လူးရွှေပေါ် ,